Wafdiga Somaliland Oo Tababar Ku Qaadanaya Itoobiya Ka Hor Inta Aysan Tegin Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa, Mareeg.com: Wafdiga maamulka Somaliland uga qeybgelaya wada hadalka lagu wado inuu bishaan Janaayo gudaheeda ku dhexmaro dowladda Soomaaliya iyo maamulkaas ayaa shalay tegay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Wafdiga Somaliland waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha debadda maamulkaas Maxamed Biixi Yoonis, wuxuuna sheegay markii ay ka ambabaxayeen garoonka diyaaradaha Hargeysa iney ku hormarayaan magaalada Addis Ababa.
Maxamed Biixi ayaa shegay iney Addis Ababa ku qaadanayaan tababar qaadanaya todobaad, kaasoo ku saabasan sida loo galo wadahadallada.
Wasiir Biixi ayaa tilmaamay iney Itoobiya ka baxayaan 14-ka bisha Janaayo, islamarkaana Turkiga tegayaan 15-ka Janaayo ee 2014.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa horay labo wareeg oo wadahadal ah ku qaatay dalka Turkiga, hase ahaatee natiijo muuqata kama soo bixin marka laga reebo in lagu heshiiyey in labada dhinac si wadajir ah u maamulaan hawada Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, wuxuu sheegay wasiirku in dowladda Soomaaliya iyo safiirka Turkiga ee Soomaaliya ay maamulka Somaliland ka codsadeen in shirka wada hadalka laga dhigo wixii ka dambeeya kala barka bisha Janaayo.